60 – မောင်လာနာ ကာရီ မက်္ကဆူဒ် အဟ်မဒ်ခန် ဦးခင်မောင်ကြီး(ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန် မြန်မာပြန်ဆိုခဲ့သူ) | Lumyo Chit
60 – မောင်လာနာ ကာရီ မက်္ကဆူဒ် အဟ်မဒ်ခန် ဦးခင်မောင်ကြီး(ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန် မြန်မာပြန်ဆိုခဲ့သူ)
မောင်လာနာ ကာရီ မက်္ကဆူဒ် အဟ်မဒ်ခန်
ဆရာ့ကို အဖ ဟာဖိဇ် မဟ်မူဒ်အဟ်မဒ်ခန်နှင့် အမိ သရက်သူ ဒေါ်ခတီဂျာဘီတို့မှ ၁၉၁၇ ခုနှစ်တွင် သရက်မြို့၌ ဖွားမြင်သည်။ မွေးချင်း ငါးယောက်အနက် သားကြီးသြရ သဖြစ်သည်။ဆရာ့ဖခင်သည် ရန်ကုန်မြို့၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ၄၈-လမ်းရှိဆွာဒီကီယာ ဟဖ်ဇွလ်ကုရ်အာန် (ကုရ်အာန်အာဂုံဆောင်)ကျောင်းကြီးကို စတင်တည်ထောင်သူ ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးဖြစ်သည်။ ငယ်စဉ်က ရန်ကုန်တွင် ဘာသာရေးအခြေခံပညာကို သင်ယူသည်။ ဆရာကြီး၏ဖခင်ဖြစ်သူ ဟာဖိဇ် မဟ်မူဒ်အဟ်မဒ်ခန်သည် မန္တလေးမြို့ ဟိန်္ဒူစတန်နီဗလီ၏ရှေ့ဆောင်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ် ဖခင်ကြီး ၏အစီအစဉ်ဖြင့် မန်္တလေးမြို့ စူရတီဗလီ မွတ်ဖတီအစ်္စမာအီလ် (ကဖ်လိုင် သ၀ီ)သခင်ကြီးထံ အနေ်္တ၀ါသိက တပည့်အဖြစ် ကျိုးနွံစွာ ဆည်းကပ်ခဲ့သည်။ မွတ်ဖတီကြီးသည် လက်ရှိမန်္တလေးမြို့ စူရ်တီဗလီရှေ့ဆောင် ဆရာကြီး ဟာဖိဇ် မုဟမ်္မဒ်၏ဖခင်ဖြစ်သည်။
ဆရာဖြစ်သူကလည်း မိတ်ဆွေရင်းချာ၏သားဖြစ်သူကို စေတနာ ထားသကဲ့သို့ တပည့်ဖြစ်သူကလည်း လိုလိုလားလား ပင်ပန်းဆင်းရဲခံကာ ပျပ်ဝပ်ကျိုးနွံစွာ ကြိုးပမ်းဆည်းပူးခဲ့သဖြင့် ပညာအရာတွင် ကောင်းစွာပေါက်မြောက်ထူးချွန်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံရပ်ခြားတက်္ကသိုလ်များတွင် ဆက်လက် ဆည်းပူးရန်ကြံသော်လည်း စစ်ကြီးကြောင့် အဟန့်အတားဖြစ်ရသည်။ မိမိဆရာသခင်ကလည်း မိခင်ကိုပြုစုရန်သာ မိန့်မှာသည်။ တမန်တော်မြတ် လက်ထက်တော်က သာသနာ့အန်္တရာယ်ကို ကာကွယ်တိုက်ဖျက်လိုသူ တစ်ဦး စစ်ထဲလိုက်ပါခွင့် တောင်းရာ တမန်တော်မြတ်ကြီးက ထိုသူကို မိခင်ရှိသလောဟုမေးတော်မူသည်။ ရှိပါကြောင်း ဖြေသောအခါ “သင့်မိခင် အား ၀တ်ကြီးဝတ်ငယ် အသွယ်သွယ်ကိုသာ ပြုစု၍ နေပါလော့”ဟု မိန့်တော်မူဖူးပါသည်။
ဤသြ၀ါဒကို ဆရာသိပြီးဖြစ်သည်။ ပညာသင်ခရီး မထွက်ဖြစ်ခဲ့တော့ပါ။ ဆရာသည် သံလျင်မြို့ စိန်ကုံးဗလီ၊ ပြည်မြို့ စူရတီဗလီ၊ ရန်ကုန်မြို့ ၂၆လမ်းရှိ မမ်ဆားဗလီတို့တွင် ရှေ့ဆောင်ဆရာအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့သည်။ ရန်ကုန်မြို့ မောင်လာနာဘီဒီ ကုမ်္ပဏီ အလုပ်သမားခေါင်းဆောင်အဖြစ်လည်း တာဝန်ထမ်းခဲ့သည်။ထိုအတောအတွင်း မဇွာဟေရီ မော်လ၀ီများအား မျက်မုန်းကျိုးနေ သော ဆရာကြီးတစ်ပါး၏ဆောင်းပါးသည် ပရ်ဝဇ်နေ့စဉ်တွင်ပါလာသည်။ဆရာမက်္ကဆူဒ်က ချေပရှင်းလင်းချက်ရေးသည်။ ဒေါင်ရေဂျဒီဒ်သတင်းစာကဖော်ပြပေးသည်။ ထပ်မံ၍ ပရ်ဝဇ်သတင်းစာက ရေးပြန်သည်။ ဆရာ၏ပြတ်ပြတ်သားသား ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် တုံ့ပြန်ချက်ကို ဒေါင်ရေဂျဒီဒ် သတင်းစာက ဖော်ပြသည်။ သို့ဖြင့် ဇာတ်လမ်း တစ်ခန်းရပ်သွားခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ ဤတွင် ဆရာ၏အရည်အသွေးပေါ်လွင်သွားပြီး သတင်းစာအယ်ဒီတာချုပ်က ဆရာ့ကို ကုရ်အာန်ဘာသာပြန်ကိစ်္စတွင် ဆရာဃာဇီအား ကူညီရန် တိုက်တွန်းသည်။ ထိုစဉ်က မိမိတွင် ငွေငါးဆယ်ကျပ်မျှသာဝင်ငွေရှိ၍ အလုပ်သစ်ရချင်သော်လည်း သူ့ဝန်ထမ်းဘ၀ကို မနှစ်သက်သဖြင့် ငြင်းခဲ့သေးသည်။ လူမှန်နေရာမှန်ဖြစ်ကြောင်း တိုက်တွန်းလွန်းမှကုရ်အာန်ဘာသာပြန်ဌာနတွင် ၀င်ရောက်ခဲ့သည်။ ပညာရဲရင့့်် ပွဲလဲလယ်တင့် ခဲ့ သည။် သို့နှင့် ဆရာသည်၁၉၅၂ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၁ ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံ အစ္စလာမ်သာသနာရေးရာအဖွဲ့၊ စာပေပရိယတ်္တိကော်မတီ တွဲဖက်ဘာသာပြန် ဖြစ်လာသည်။ ဆရာကြီးဃာဇီနှင့် ဆွေးနွေးဘက် ဖြစ်ခဲ့သည်။
ဆရာသည် မောင်လာနာအီဗရာဟင် အဟ်မဒ် မဇွာဟေရီ က ဒါရိုက်တာလူကြီးအဖြစ် ပါဝင်ဆောင်ရွက်သည့် မွတ်စလင်မ်အပတ်စဉ်တွင် လစဉ် ပါဝင်ရေးသားခဲ့သည်။ ၁၉၅၀ ပြည့်၊ ဒီဇင်ဘာလထုတ် အတွဲ ၁၊အမှတ် ၁ မှစ၍ “အစ်္စလာမ်တရားဖြတ်ထုံးများ” ဘာသာပြန်ကို တင်ပြ သည်။ စူရတီဗလီ ဒါရွလ်အ(စ်)ဖတာမှ မွဖ်တီ အစ်္စမာအီလ် မုဟမ်္မဒ်ဂိုရာ ၏ ဖတ်ဝါဓမ်္မသတ်ဖြတ်ထုံးများကို အခန်းဆက် ဘာသာပြန်တင်ပြခြင်းဖြစ်သည။် ကလောင် အမည်ကို မုဟမ္မဒ် မက္ကဆူဒ် ခန်း ခင်မောင်ကြီးဟု ဖော်ပြသည်။ အခြားပုဂ်္ဂိုလ်များကဲ့သို့ နောက်ပိုင်းကျမှ အရဗီနှင့်မြန်မာအမည် ယှဉ်တွဲဖော်ပြသူမဟုတ်ကြောင်း သိနိုင်သည်။
ဆရာ့ကို ၁၉၅၁ ခု ဗမာမွတ်စလင်မ် အိုလမာအဖွဲ့ချုပ်၏ ပြည်လုံးကျွတ် ညီလာခံက ဗမာမွတ်စလင်မ် အိုလမာအဖွဲ့ချုပ်၏ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူးအဖြစ် တင်မြှောက်သည်။ ဆရာသည် အိုလမာအဖွဲ့ ဌာနချုပ် ဓမ္မသတ်ဖြတ်ထုံး အဖွဲ့နှင့် လကြည့် စိစစ်ရေးအဖွဲ့များ တွင် အဖွဲဝင်ဖြစ်သည်။
အစ္စလာမ်သာသနာရေးရာ ကောင်စီဌာနချူပ်တွင်လည်း အတွင်းရေးမှူး(ကျမ်းပြုစာတည်း အဖွဲ့ဝင်) အဖြစ်ပါဝင် သည်။ အစ္စလာမ်စာစောင် စတင်ထုတ်ဝေသည်မှအစပြု၍ တမန်တော်မုဟမ်္မဒ်သခင်၏သြ၀ါဒတော်များ ခေါ် ဟဒီးဆ်ဘာသာပြန်ကဏ္ဍကို တာဝန်ယူခဲ့သည်မှာ ၁၉၅၆ ခုအထိ ဖြစ်သည်။ အခါအားလျော်စွာ ဆွဒကိသုလ် ဖစ်သွရ် ကဲ့သို့သောဆောင်းပါးများလည်း ရေးသားဖော်ပြသည်။
ဆရာသည် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အိုလမာအစ်္စလာမ်သာသနာ့ ပညာရှင်များအဖွဲ့ချုပ်တွင် ဥက်္ကဋ္ဌကြီး မွဖ်တီချုပ် မဟ်မူဒ်ဒါဝူးဒ်ယူစွဖ်နှင့် လက်တွဲ၍ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ်တာဝန်ကို နှစ်ပေါင်း ၃၀ ခန့်အထိ တာဝန်ယူခဲ့သည်။ အထိမ်းအမှတ်တရားပွဲများ၊ လေလှိုင်းမှ ဟောကြားသည့်တရားများကို မြန်မာရည်လည်သော ဆရာ့ကိုသာ အများဆုံး တာဝန်ပေးကြသည် ရုံးပြင်ကနားကိစ်္စများတွင် ဆရာသာအသင့်လျော်ဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ တက်္ကသိုလ်ပညာတတ် ပရိသတ်ကလည်း ဆရာ့၏တရားဓမ်္မများကို နှစ်သက်ကြသဖြင့် တက်္ကသိုလ်တွင် အခါ အားလျော်စွာ ဟောကြားခဲ့သည်။ ၂၉-၉-၆၂ နေ့တွင် ဟောကြားသော မိမိကိုယ်ကို အဘယ်ကြောင့် မွတ်စလင်ဟုခေါ်ရသနည်း ဟူသော ခေါင်းစဉ်သည် တက်္ကသိုလ်တွင် ဆရာဟောကြားသော နောက်ဆုံးခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါသည်။ဆရာသည် ကုရ်အာန်ဘာသာပြန်ဌာနတွင် ကုရ်အာန်ဘာသာပြန် အစအဆုံး ပြီးစီးအောင် ၁၈ နှစ်တာ တာဝန်ယူသကဲ့သို့ အချိန်ရသရွေ့ သုံး၍ အခြား စာပေကျမ်းဂန်များလည်း ပြုစုခဲ့သည်။ ယင်းတို့အနက်လူသိများသောကျမ်းများတွင်-
– ဖဇာအေလေ ဆွဒကာဟ်ကျမ်း
– ဖဇာအေလေ နမာဇ်ကျမ်း
– ပညတ်တော် ၁၀ ပါးကျမ်း
– ဖဇာအေလေ ဒရူးဒ်ကျမ်း
– ကာဒီယာနီဝါဒကို လွယ်ကူစွာသုံးသပ်နည်းကျမ်း များ ပါဝင်သည်။ ကာဒီယီယာနီဝီ၀ါဒကို လွယ်ကူစွာသုံးသပ်နည်း မူရင်း စာအုပ်ကို အိန်္ဒိယပြည် လပ်ကနောင်မြို့ရှိ နဒ၀သွလ်အိုလမာသိပ်္ပံကျောင်းကြီး၏ဟဒီးဆ်ပါမောက်္ခနှင့် အလ်ဖုရ်ကန်စာစောင်၏ အယ်ဒီတာဖြစ်သူ မောင်လာနာ မန်ဇူရ် နိုအ်မာနီ က အူရဒူဘာသာဖြင့် ပြုစုရေးသားခဲ့သည်။ အိုလမာအဖွဲ့ချုပ်အတွက် ဆရာက ပြန်ဆိုပေးခြင်းဖြစ်သည်။
ဆရာ၏ ထူးခြားထင်ရှားသောလုပ်ငန်းကား ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ် မြန်မာဘာသာပြန်လုပ်ငန်းကြီးဖြစ်သည်။ အလ်္လာမဟ် မောင်ဒူဒီ၏ သဖ်ဟီ မွလ်ကုရ်အာန် အစအဆုံး(အစောင် ၃၀)ကို တစ်ဦးတည်း ၆ နှစ်ခန့်အချိန်ယူ၍ ကြိုးပမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ စာမူကို စာကူးစက်ဖြင့် မူပွား ထုတ်ဝေရာတွင် အိုလမာအဖွဲ့ချုပ် ဓမ်္မသတ်ဌာနတာဝန်ခံ မော်လ၀ီ အဗဒ်္ဗ လူ ၀် လ၏ီ သား မော်လ်လ၀ီ အဗ်္ဗဒ်္ဗဒူလူလ်ခါလိက် က ကူညီခဲ့သည်။
မော်လ၀ီ အဗ်္ဗဒူလ်ခါလိက်သည် ဖဟ်ဒ်ဘုရင် ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ် ပုံနှိပ်တိုက်မှ ထုတ်ဝေသည့် ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ် မြန်မာဘာသာပြန်ကို တည်းဖြတ် ထုတ်ဝေပေးသည့် မောင်လာနာ ၂ ဦးအနက် “မောင်လာနာအဗ်္ဗဒွလ် ခါလိက်္က အဗ်ဒွလ်ဝလီ မဇာဟရီ” ဟု ဖော်ပြထားသည့် မောင်လာနာ ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
ဆရာသည် ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်၏ အလင်းပြကျမ်း ပေါ်ထွက်ပြီ ဖြစ်ပါလျက် တစ်ကိုယ်တော်အစွမ်းပြခြင်းမှာ ကျော်ကြားလို၍မဟုတ်၊ မူလဘာသာပြန်ပြီးသားကို ကူးရေးလျှင် ၆ရက်ခန့်သာကြာမည်ဖြစ်သော်လည်း၆နှစ်ခန့်ကြိုးပမ်းခဲ့ခြင်းမှာ ထင်ရှားလို၍ မဟုတ်၊ မိမိကိုယ်ပိုင်သုံးသပ်ချက်ကို လွတ်လပ်စွာ ဖော်ထုတ်လို၍ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။ “သာသနာ့ ပညာရှင်များအား ဤဘာသာပြန်တွင် အမှားအယွင်းတစ်စုံတစ်ရာတွေ့လျှင် ညွှန်ပြလာကြရန် မေတ်္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်”ဟု အစောင် ၁ မှစ၍ ဖိတ်ခေါ်ထားသည်။ ညွှန်ပြလိုသူကား ဆရာကွယ်လွန်ပြီး ၃ နှစ်ကြာမှ ပေါ်ထွက်ခဲ့သည်။
ညွှန်ပြချက်သာမက ဓမ်္မသတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ပါ တွေ့ရသည်။ အီစာသခင်နှင့်ပတ်သက်၍လည်းကောင်း၊ ဘီဘီခတီဂျာသခင်မနှင့်ပတ်သက်၍ လည်းကောင်း အငြိအစွန်းများပါနေ၍ဟု ဆိုပါသည်။ဆရာသည် တစ်ခြမ်းပဲ့ဗလီတွင် ၁၉၅၀ မှ ၁၉၆၄ ခုနှစ်အထိလည်းကောင်း၊ ကီလီလမ်းဗလီတွင် ၁၉၇၃ ခုနှစ်မှ ကွယ်လွန်သည်အထိလည်းကောင်း ရှေ့ဆောင် တာဝန်ထမ်း ဆောင်ခဲ့သည်။
ဆရာသည် ၁၉၈၀ ပြည့်နှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့တွင်ဘားလမ်း မွတ်စလင်မ်ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးရုံ၌ အရှင့်အမိန့်ခံယူခဲ့သည်။
မွတ်စလင်လောကအတွက် ဆုံးရှုံးမှုကြီးဖြစ်ပါသည်။ ကိုယ်တိုင်ကား ပြင်ပတက်္ကသိုလ်များတွင် ဆည်းပူးခွင့်မကြုံခဲ့သော်လည်း ဆရာသည် ဒေယိုဘန်နှင့် ဆဟာရန်ပူရ်ကျောင်း တော်ဆင်း ပညာရှင်များနှင့်ယှဉ်၍ ပညာစွမ်းပြနိုင်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ပင် မွဖ်တီချုပ်က “သူသည် အခေါ်အဝေါ်အားဖြင့် စနဒ်ရ ပညာရှင်တစ်ဦးမဟုတ်ခဲ့ပါ။ သို့သော် အလ်္လာဟ်အရှင်က သူ့အား ချီးမြှင့်ပေးထားသော ပညာအရည်အချင်းကို စနဒ်ရ ပညာရှင်ရာပေါင်း များစွာတို့ပင် ရရှိခြင်းမရှိပါ”ဟု ဆရာ့ပညာဂုဏ်ကို လှိုက်လှဲစွာဖော်ကျူး ခဲ့သည်။အလားတူပင် အိုလမာဓမ်္မသတ်ဌာနတာဝန်ခံ မော်လ၀ီ အဗ်္ဗဒွလ်ဝလီ ဆွာဟိဗ်ကလည်း-“မော်လ၀ီမက်္ကဆူဒ်ကတော့ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါပြီ၊ ဒါပေမဲ့နောက်ထပ် အနှစ်တစ်ရာအတွင်းမှာလည်း အဲဒီလို မက်္ကဆူးဒ်မျိုးမွေးဖွားလာဖို့ဆိုတာ မဖြစ်သေးပါဘူး”ဟု ဆရာကို ရှာမှရှားပါဟု ဆိုပါသည်။ ဆရာ၏ ပြောဆိုပြုမူမှုမှန်သမျှသည် အများအားဖြင့် အိုလမာအဖွဲ့ ကိုယ်စားပြုနိုင်ခဲ့ပါသည်။
အခက်အခဲကြားမှ ထူးချွန်ထက်မြက်စွာ ကိုယ်စားပြုခဲ့သူဖြစ်ပါသည်။ ဆရာကွယ်လွန်ချိန်တွင် အမွေခံသားသမီး စုစုပေါင်း ၈ ဦး ကျန်ရစ်ပါသည်။ဆရာကြီး၏ ပထမဇနီးသည် သရက်မြို့သူ ဒေါ်ဖာတီမာဖြစ်သည်။ ဒုတိယသမီးမွေးဖွားချိန် မိခင်ရောကလေးပါ မီးတွင်း၌ ဆုံးပါးရှာသည်။ သမီးကြီးဖြစ်သူ ဟဗ်ဆာနားနာပ် ခေါ် မအေးအေးလွင် ငါးနှစ်ခန့်အရွယ် တွင်ဆရာသည် ဒေါ်ဟလီမာ ခေါ် ဒေါ်ခင်ညိုနှင့် လက်ဆက်ခဲ့သည်။
ဒုတိယဇနီး၏ သားသမီ ၇ ဦးမှာ မန်ဇူးရ်အဟ်မဒ် တင်ဝင်း၊စလ်ယတီ တင်တင်ရီ၊ အိုမိုင်ရာ မနီ၊ မတ်စ်အူးဒ် နေ၀င်း၊ မောင်ဒူးဒ်ကျော်ဝင်း၊ အဇ်ရာ ခင်မျိုးဝင်းနှင့် အူဒိုင်ဆာ ခင်မိုးဝင်းတို့ ဖြစ်ကြသည်ဤတွင် ပဉ်္စမမြောက်သားဖြစ်သူမှာ ဟာဖိဇ် ကာရီ မွဖ်သီကျော်ဝင်း (နုအ်မာနီ၊ အဇ်ဟရီ) ဖြစ်ပြီး စတုတ်္ထမြောက်သားဖြစ်သူသည် ဟာဖိဇ်ကာရီ မော်လ၀ီ မာစ်အူးဒ် နေ၀င်း ဖြစ်သည်။ ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီ၊ ဆရာ့၏ ဓမ်္မသံသာများကား စီဒီမှတစ်ဆင့် ပျံ့လွင့်ဆဲ၊ ဆရာ၏ ဘာသာပြန်များက တဗ်လိဂ်ဝိုင်းများတွင် အကျိုးပြုဆဲ၊ဆင့်ပွားဆဲ ဖြစ်ပါသည်။
Credit : Posted by Chitt Oo,MMSY
This entry was posted in Biography and tagged Post. Bookmark the permalink.
← ပသီသမိုင်းလေ့လာချက်များ-စာတန်း (EBook By ပသီဦးကျော်ဦး)
ဒိုးပတ်ဆရာကြီး စိန်ဒေါ်လာ (ခ) ဦးအပ္ပဒွလ္လာ →